Muungaab “Dowladda hoose ee Xaamar waxey qoraneysaa shaqaale ku filan nadaafadda magaalada Muqdisho – Radio Muqdisho
Muungaab “Dowladda hoose ee Xaamar waxey qoraneysaa shaqaale ku filan nadaafadda magaalada Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in mashruuca dalkaaga dhiso oo ay hogaaminayaan ganacsato Soomaaliyeed lagu dhisi doono waddooyinka burbursan ee magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho “Muungaab” oo shalay ka hadlay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay degmooyin ku guuleystay nadaafadda ayaa sheegay in nadaafadda ay tahay qorsha howleedka ugu horreeya ee maamulka gobolka Banaadir.
Wuxuu tilmaamay in wadooyinka burbursan uu maamulku dib u dhis ku sameyn doono, isagoo kaashanaya ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho.
“Muungaab” oo hadalkiisa sii wata ayaa iclaamiyay in dowladda hoose ee Xamar ay qaadan doonto shaqaale dheeraad ah oo ku filan nadaafadda iyo dib u dhiska wadooyinka magalada Muqdisho.
Gudoomiye “Muungaab” ayaa intaasi ku daray in shaqaalaha ay qoraneyso dowladda hoose ee Xamar la siin doono mushaar ku filan oo ay ku noolaan karaan, wuxuuna hoosta ka xariiqay in qorista shaqaalahaasi ay bilaaban doonto bishan Febrayo ee sanadkan.
Dhageyso Warka Subax 30.01.2015,